मतदाताले सोधे– कम्युनिष्ट सरकार आए बिहे पनि गर्न नपाइने हो र ? – Janaubhar
मतदाताले सोधे– कम्युनिष्ट सरकार आए बिहे पनि गर्न नपाइने हो र ?
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, मंसिर १, २०७४ | 264 Views ||
देउखुरी, मंसिर १ । ‘कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि त हाम्रो निजी सम्पति नि हुँदैन । घर जग्गा सबै सरकारले कब्जा गर्छ । ८ घण्टा अनिवार्य काम गर्नुपर्छ । बिहे पनि गर्न पाइदैन । गरेको भए पनि सँगै बस्न पाइदैन । यसो हो भने त हामीले कम्युनिष्टहरुलाई किन भोट दिने ?’
आगामी मङ्सिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा राजपुर गाँउपालिका–३ करंगाखोला पुगेको बाम गठबन्धनका उम्मेदवार इन्द्रजित थारुलाई स्थानीय पानकुमारी बादीले शुरुमै यो प्रश्न गरिन् ।
इन्द्रजित त्यतिबेला अचम्म परे जब कि पानकुमारी जस्तै भेलामा सहभागी अन्य केही मानिसहरुले पनि यस्तै किसिमको प्रश्न उनीसामु गरे । इन्द्रजितले यस बारेमा थप कुरा थाहा पाउन पानकुमारीलाई आफुले सुनेका अन्य कुराहरु पनि भन्न आग्रह गरे ।
पानकुमारी आफुले सुनेका कुरा सुनाउँदै गइन्, ‘आफ्नो लोग्नेलाई लोग्ने भन्न नि पाइन्न भन्छन् । छोराछोरी पनि बाउआमासँग बस्न पाउँदैनन् । बोल्नसमेत प्रतिबन्ध लाग्छ । सरकारले जे भन्यो त्यो मान्नैपर्छ । नत्र सरकारले जे पनि गर्न सक्छ सम्म सुनेकी छु ।’
यस्तै आफुले सुनेका अन्य धेरै कुरा पानकुमारीले सुनाइन् ।
मतदातामाझ भ्रम छर्दै दाङ कांग्रेस
यी सबै कुरा उनले बाम गठबधनका उम्मेदवार पुग्नु एक दिनअघि मात्र सो स्थानमा पुगेका काँग्रेस उम्मेदवार प्रदीप थापालगायत नेताहरुले स्थानीय जनतालाई भनेका कुरा हुन् ।
कम्युनिष्ट सरकार बने देशमा पूर्णतः निरंकुश शासन रहने र त्यसपछि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पूर्णतः खोसिने भन्दै देशको लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारहरुलाई जिताउन उनले अघिल्लो दिन स्थानीयलाई आग्रह गरेका रहेछन् ।
स्थानीयका कुरा सुनेपछि उम्मेदवार थारुले काँग्रेसको तर्फबाट भनिएका यस्ता सबै कुरा भ्रम मात्र भएको बताए । बाम गठबन्धनको जित सुनिश्चित भएपछि काँग्रेसका उम्मेदवारहरुले भ्रम फैलाएर जनताको मन जित्न खोजेको उनले बताए ।
‘जनतालाई रैती ठान्ने प्रवृत्तिको अझैं अन्त्य हुन सकेको छैन । केही मान्छे यस्तै भ्रम छरेर निर्वाचन जित्ने प्रयास गरिरहेका छन् । जनताको चेतना स्तरलाई जहिल्यै कमजोर ठान्ने यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ’ उनले भने, ‘ढुक्क हुनुस् कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि मुलुक अझै लोकतान्त्रिक र समृद्ध हुनेछ । तपाईहरु झन शक्तिशाली हुनु हुनेछ । जनताको सत्ता स्थापना गर्नका लागि नै अहिले बाम गठबन्धन बनेको हो । हामी स्थिर सरकारमार्फत् मुलुक र जनता सबैलाई बलियो बनाउनेछौं ।’
इन्द्रजितको कुरा सुनेपछि स्थानीय युवा ललित परियारले यस्तो काँग्रेसले भ्रमको खेती गरिरहेको बताए । भोट माग्ने क्रममा काँग्रेसले आफ्नो एजेण्डा भन्दा पनि कम्युनिष्टहरुलाई नानाथरी आरोप लगाएर स्थानीयलाई भ्रम पार्न खोजे पनि त्यो सम्भव नभएको उनको भनाई थियो ।
‘यस्ता किसिमका भ्रमले अब जनताको मन जितिएला भन्ने सोच्नु असम्भव छ । दाङका विकट क्षेत्रमा बसोबास गरे पनि जनताको चेतनाको स्तर धेरै माथि उठिसकेको छ । मुलुकलाई स्थायी सरकार अत्यावश्यक छ । स्थीर सरकारबाट नै मुलुक समृद्ध हुनेछ ।’
Prevमहरा, बर्षमान र ओनसरीलाई लक्षित गरी रोल्पामा बम प्रहार
Nextकृष्णबहादुर महराको प्रतिबद्धता पत्र : दाङलाई पश्चिम नेपालकै केन्द्र बनाउने घोषणा